U Chit၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
U Chit's Apps
U Chit's Likes
U Chit's ၏မိတ်ဆွေများ
U Chit's Groups
U Chit's Discussions
စာအောင်ခြင်း နှင့် စာတတ်ခြင်း
Started this discussion. Last reply by U Chit Jun 16, 2012.2Replies 1 Like
ဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျား....စာအောင်ခြင်းနှင့် စာတတ်ခြင်း သည် အမြဲတမ်း တွဲဖက်နေသောကိစ္စ ဖြစ်နိုင်ပါသလား ဆိုလိုသည်မှာ စာအောင်သော်လည်း စာတတ်သည်ဟုပြောနိုင်ပါသလား.... စာမအောင်သော်လည်း စာမတတ်ဟု ပြောနိုင်ပါသလား…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
Started this discussion. Last reply by U Chit မေ 15, 2012.2Replies0Likes
ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်တစ်ယောက် အနေနဲ့ သာသနာ့အမွေကိုခံယူဘို့ဘာတွေလုပ်ရမှာလဲ... သာသနာ့ဘောင်မှာ ကိုရင်ဝတ် ..ဒါမှမဟုတ် ရဟန်းဝတ်ရင် သာသနာ့ အမွေကို ခံယူပြီးသားဖြစ်သွားရောလားအဲဒီလို ဖြစ်ဘို…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
ကံ နှင့် ကံ၏အကျိုး ဆိုင်ရာ ပြဿနာ တစ်ချို့ 
Started this discussion. Last reply by U Chit မေ 10, 2012. 16 Replies2Likes
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တို့ သည် ကံ နှင့်ကံ၏ အကျိုးကို လက်ခံယုံကြည်ပြီးဖြစ်ကြပါသည်။ သို့ ရာတွင် တကယ်တမ်း ကံ အကျိုးပေးပုံ ဆန်းကျယ်လာသောအခါ သံသယ ဖြစ်ရသည်များဖြစ်ပေါ်လာ တတ်ပါသည် ။ ဓမ္မ မိတ်ဆွေများ မှ ထိုသို့ သော…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
ပြိုင်လာလျှင် အရှုံးပေး နှလုံးအေးတဲ့ဆေး
Started this discussion. Last reply by 3hugiiftwckx6 Mar 29, 2012.3Replies0Likes
ပြိုင်လာလျှင်အရှုံးပေး နှလုံးအေးတဲ့ဆေး ဆိုတာ လူတိုင်းသိနေကြတဲ့ လင်္ကာလေးပါ ။ ဘုရားဟောတရား ဟုတ်သလား မဟုတ်သလား တော့မသိပါဘူး ။ နဲနဲတော့စဉ်းစားပေးကြစေခြင်ပါတယ် ။ အရှုံးပေးရတဲ့သူ ရဲ့စိတ်ဟာ…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
U Chit သည်လက်ဆောင်မရရှိသေးပါ။
phyuthi သည်U Chitကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်U Chit's ၏ 'အနတ္တလက္ခဏသုတ် ( ပါဠိ-မြန်မာ- အင်္ဂလိပ်)' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဉာဏ်လင်းမြို့ သည် U Chit's၏ '" ဒုလ္လဘ ဆိုတာ "'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"ဗိုလ် ချစ် ရေ သစ်တယ်ဗျာ...။ သင့် ဉာဏ်လင်းမြို့"
Thet Thet Aung သည်U Chit's ၏ '" ဒုလ္လဘ ဆိုတာ "' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
U Chit သည်ဘလော့တင်သွားပါသည်။
" ဒုလ္လဘ ဆိုတာ "
နှစ်စဉ် အတာသင်္ကြန် ကာလတွင် မြင်တွေ့နေကျ မြင်ကွင်းများထဲမှာ ဒုလ္လဘရဟန်း များ ဆွမ်းခံကြွကြသည့်မြင်ကွင်း ဟာ ကြည်နူးစရာ ကြည်ညိုစရာ ကောင်းလှပါ၏ ။ဒုလ္လဘရဟန်း နှင့်ပတ်သက်သော အမေးအဖြေ တစ်ခုကို ဗဟုသုတ အလို့ငှါ မျှဝေလိုက်ရပါသည် ။၁* ဒုလ္လဘရဟန်းသည် မည်သည့်ခေတ်ကစတင်ခဲ့ပါသနည်း။၂* ဒုလ္လဘရဟန်းခံခြင်းကို ဗုဒ္ဓ…See More
ချိုမာ သည်U Chit's ၏ 'သေနေ့ အကြို နှုတ်ဆက်ပွဲ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
U Chit သည်လှိုင်ကျော်ထွေး's ၏ 'ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ် (၃) နှစ်ပြည့် (သို့မဟုတ်) သာသနာဟိတ အသင်း (၂) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အလှူ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Nilar သည် U Chit's၏ 'သေနေ့ အကြို နှုတ်ဆက်ပွဲ'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
Daw Khin Aye သည်U Chit's ၏ 'သေနေ့ အကြို နှုတ်ဆက်ပွဲ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဉာဏ်လင်းမြို့ သည် U Chit's၏ 'သေနေ့ အကြို နှုတ်ဆက်ပွဲ'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"ဤသို့ "ဓမ္မဒါန တရားအလှူတော်" လှူဒါန်းရသည့် "ကုသိုလ် ကံ စေတနာ"တို့ ကြောင့် "ဒုက္ခခပ်သိမ်းကင်းငြိမ်းရာအမှန် မြတ်နိဗ္ဗာန်"ကို လျှင်မြန်စွာ မျက်မှောက်ပြုနိုင်သော အကြောင်း "အထောက်အပံ့" ဖြစ်ပါစေသော်ဝ်။ (May you be…"
လင်းကိုကို သည် U Chit's၏ 'သေနေ့ အကြို နှုတ်ဆက်ပွဲ'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"ကောင်းမြတ်လှပါတယ် ခင်ဗျာ...အတုယူ လေးစားဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်..."
mun mun aung သည်U Chit's ၏ 'သေနေ့ အကြို နှုတ်ဆက်ပွဲ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
meemee သည်U Chit's ၏ 'သေနေ့ အကြို နှုတ်ဆက်ပွဲ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
သေနေ့ အကြို နှုတ်ဆက်ပွဲ
ကျွန်တော်၏ facebook စာမျက်နှာတွင် တွေ့ ခဲ့ရသော ဗုဒ္ဓအဆုံးအမ လိုက်နာရာတွင် အတုယူဘွယ် ကောင်းသောအဖြစ်တစ်ခုကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါသည် ။ မူရင်း post မှာ ရန်ကုန် နာရေးကူညီမှုအသင်းမှ public ဖြင့်တင်ထားသော post ဖြစ်၍ မိတ်ဆွေများ ထံထပ်မံမျှဝေပေးလိုက်ရပါသည် ။…See More
U Chit's ၏ဓါတ်ပုံများ
U Chit's Blog
ဒီဘလော့ကှိုဧပြီ 14, 2014 တွင်1:19pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments 1 Like
နှစ်စဉ် အတာသင်္ကြန် ကာလတွင် မြင်တွေ့နေကျ မြင်ကွင်းများထဲမှာ ဒုလ္လဘရဟန်း များ ဆွမ်းခံကြွကြသည့်မြင်ကွင်း ဟာ ကြည်နူးစရာ ကြည်ညိုစရာ ကောင်းလှပါ၏ ။
ဒုလ္လဘရဟန်း နှင့်ပတ်သက်သော အမေးအဖြေ တစ်ခုကို ဗဟုသုတ အလို့ငှါ မျှဝေလိုက်ရပါသည် ။
ဒီဘလော့ကို နိုဝင်ဘာ 20, 2013 တွင်12:11am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။4Comments6Likes
ကျွန်တော်၏ facebook စာမျက်နှာတွင် တွေ့ ခဲ့ရသော ဗုဒ္ဓအဆုံးအမ လိုက်နာရာတွင်
အတုယူဘွယ် ကောင်းသောအဖြစ်တစ်ခုကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါသည် ။ မူရင်း post မှာ ရန်ကုန်
နာရေးကူညီမှုအသင်းမှ public ဖြင့်တင်ထားသော post ဖြစ်၍ မိတ်ဆွေများ ထံထပ်မံမျှဝေပေးလိုက်ရပါသည် ။…
ဒီဘလော့ကို နိုဝင်ဘာ 5, 2013 တွင်3:30pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။6Comments5Likes
ဒီဘလော့ကို စက်တင်ဘာ 22, 2013 တွင်8:11pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments2Likes
ဝိပဿနာရှုရာမှာ သိဘို့ လိုအပ်တာ တွေကိုရှာဖွေလေ့လာထားသမျှလိုရင်းတိုရှင်းမေးဖြေ ပုံစံဖြင့်ရေးထားတာပါဝေဘန်သုံးသပ် ကြပါအုံးခင်ဗျာ …
မေး။ ။ နာမ်ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးပါရစေ…
ဖြေ ။ ။ ရုပ်ဓမ္မနာမ်ဓမ္မတွေ ကို အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်မှာ အသေး စိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကုန်သိအောင်လေ့လာဘို့ခက်ပါတယ် သိဘို့လိုတာလောက်ပြော ဆိုကြတာပေါ့။
မေး။ ။ ဝေဒနက္ခန္ဓာ ဆိုတာဘာပါလဲ
ဖြေ ။ ။ ခံစားတတ်သောသဘော အစုလို့ နားလည်လို့ရပါတယ်။
မေး။ ။ မခံစားတတ်တဲ့သဘောမပါဘူးလား
ဖြေ ။ ။…
7:53pm အချိန်ဇူလှိုင် 11, 2015, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
7:31pm အချိန်ဇူလှိုင် 11, 2014, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
9:55am အချိန်နိုဝင်ဘာ 9, 2012, တွင် hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ဗျို့ကိုချစ် လာလယ်ပါတယ်ဗျာ
ဆိုဒ်ထဲးလဲ လာပါအုံးဗျ....တွေ့ တာ ကြုံတာလေးတွေလဲ လာပြောပါအုံး
4:17pm အချိန်အောက်တိုဘာ 30, 2012, တွင် ♣တောသူမလေး♣ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
11:43pm အချိန်အောက်တိုဘာ 15, 2012, တွင် လင်းကိုကို မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
12:34pm အချိန်ဇွန် 17, 2012, တွင် ဇော်ထက်မောင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ကျွန်တော် လာရောက်လည်ပတ်သွားပါတယ်။ ကျန်းမာချမ်းသာပါစေခင်ဗျာ၊ တရားတော်များကိုလည်း ဒီထက်မက သိနိုင်မြင်နိုင်အောင် ကြိုးစားနိုင်သူဖြစ်ပါစေနော်။ အမြဲတမ်းခင်မင်လျက်ပါခင်ဗျာ.........။
10:41am အချိန်ှဧပြီ 22, 2012, တွင် လင်းကိုကို မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ကိုချစ် ကိုချစ်တို့ ဆရာတို့ပြောတဲ့ မိုးပြာဂိုဏ်း အကြောင်းစိတ်ဝင်စားတယ်. ကျွန်တော်လေ့လာလို့ ဖြစ်မလား.
6:58pm အချိန်ှဧပြီ 18, 2012, တွင် လင်းကိုကို မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
အတွေး ကောင်းသော သူလား (သို့မဟုတ်) အကောင်းတွေးသောသူလား
12:12am အချိန်မတ် 31, 2012, တွင် ဦးခင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မင်္ဂလာပါ။ ပေးပို့ခဲ့တဲ့စာကိုဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ ကျနော်အသက်က ၆၁နှစ်ပါ ရန်ကုန် ကျောက်မြောင်း မှာ နေထိုင်ပါတယ်။ တရားသဘာဝကိုလိုက်စားပါတယ်။ သီးသန့် ပြောပေးဖို့ မရှိပါ။ ဆွေးနွေးလိုက ပြန်
10:29pm အချိန်မတ် 21, 2012, တွင် တောင်သာ က ဥာဏ်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။